Le yindlela esiyichithe ngayo kuvavanyo lwePlayStation VR Resort kuyo yonke imidlalo | Iindaba zeGajethi
I-PlayStation ibheja kwaye yomelele kakhulu kwiNene eyiyo, kwaye impumelelo enjengeFarpoint ibonisa umsebenzi omangalisayo weqela lakwaSony Ukulawula ngentando yesininzi itekhnoloji ebonakala ngathi ithintelwe kuphela kubasebenzisi beePC ezinamandla (kunye nesipaji esikhulu), kodwa ezi ziphelele ukuwela ezandleni zabasebenzisi abaninzi bePlayStation.
Kwaye ngokungathandabuzekiyo ukuba uSony unelungelo lokuba i-PlayStation 4 yeyona nto ithengisa kakhulu kwimidlalo yentengiso kwintengiso. Nangona kunjalo ... yintoni engcono kuneholide ukuzama yonke imidlalo ye-PlayStation VR? Ke siyichithile kuvavanyo lwePlayStation VR Resort kuyo yonke imidlalo kwaye sifikelela kwisiphelo esihle.
Inkokeli esemgangathweni kwakhona yayiyi-Farpoint kunye ne-Aim Controller, enyanisweni, sinokuyifumana kumdlalo onje Ilanga laseArizona, umdlalo apho kuye kwafuneka ukuba sisinde kwimikhosi yeZombies kwaye ibisonwabisa kakhulu kwaye ingaqhelekanga. Kwelinye icala, siyavavanya IiWindlands, Apho sinokwenza eyona parkour igqithileyo kwiimpawu zayo ezimibalabala ezimnandi. Kuya kufuneka ndivume ukuba iWindlands indibangele ukuba ndibe nesiyezi emva kwamava abo okudlala, nangona bekwazile ukufumana ulawulo.
Sinokubona okungakumbi Amuletor wamandulo kwiYiputa yamandulo; URobinson: Uhambo kunye UDick wilde Apho basibonisa khona ookrebe bayoyikeka, kunye nemidlalo eliqela engakumbi efana neWaddle Home.
IGran Turismo yeMidlalo yeVR
I-simulator ye-Gran Turismo Sport ibingathandabuzi impumelelo enkulu. Ngokukhawuleza xa singenayo kwafuneka singene kulayini ongaphezulu kwemizuzu engamashumi amabini edlulile ngokukhawuleza ngokwabelana ngeembonakalo malunga Crash Bandicoot N BandSane Trilogy nabo bakhoyo.
Kodwa yayilixesha lokuba ungene emva kwevili kunye namava IGran Turismo yeMidlalo yeVR ayinakuthelekiswa nanto. Ngaphandle kwamathandabuzo, ivili lokuqhuba kunye negilasi yokwenyani enokwenza iphupha lizaliseke, hayi kuphela abalandeli beSaga yeGran Turismo, kodwa kuye nakubani na othanda isantya. Kuyinyani ukuba i-GT Sport VR isaphuhlisiwe, kodwa Iimvakalelo zokuqala ezishiye thina zazinomtsalane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Le yindlela esiyichithe ngayo kuvavanyo lwePlayStation VR Resort kuyo yonke imidlalo